Ny tontolon' IkalaFanja: mars 2015
Izay azo andrandraina, fisaorana no atao
Anio, rehefa avy nangatsiaka indray, nilona tao anaty loto (pollution) ny mponina teto parisy dia nahazo ny anjara masoandro be migaingaina anio, koa dia tsy hijery ny lasa raha izaho manokana fa hankafy ny izao ankehitriny izao, satria raha mijery izay miandry rahampitso araka ny filazana toetr'andro ao dia orana indray no ho avy eo! Koa tsy aleo ve mankafy izay misy eto amin'izao ora izao? Mankafy ny masoandro, mijery ireo voninkazo manomboka mamelana sy manomboka mandefa hanitra hanazava ny tontoloko 😉.
Satria mihiratra ny andro, miramirana ho azy ny endrika, dia faly mizara izany fotoana mamy izany aminareo e!
Ankafiziko tsotra izao izay misy eto izao. Dia zaraiko ihany koa izay voatsirambiko eto.
Dite no hanalako hetaheta 👍, manasa hiaraka hisotro e! Fa mahagaga ahy fa vao misy masoandro dia mora mangetaheta be na tsy mafana be mahatsemboka akory aza. Ny saina angamba no mitondra azy 😊. Tato ho ato dia tena nankafy tanteraka an'ity dite ity ny tenako e! Satria zatra ny dite mafana nandritra ny ririnina angamba.
Ilay lokomena indray : ALL FIRED UP - MAC💄 hmmmm io mba nanamarihako ny fahatongavan'ny lohataona (lohataona ve printemps???)
Satria ny lamaody aty izao, dia ny loko marevaka, ny akanjo misy sarim-bonikazo ary ny pataloha tongotra elefanta 🙊 hahaha. Samy maka izay tandrify azy fa izaho aloha tsy fantako na rahoviana loatra vao ho sahy hiverina hanao pataloha "pattes d'éléphant", soa ihany aho fa mpanao akanjo sy zipo, iny mba tsy dia maninona.
Izay aloha ny anio, mandalo miserana fotsiny fa mbola maro ny adidy miandry ahy.
Mazotoa daholo nareo.
Ba betsaka 😘
Publié par Ikala Fanja à 07:56 5 commentaires:
Raha mba toa ahy ianao, mpijery Youtube dia tsy zoviana aminao intsony ny lazan'ity mpamokatra izay horesahiko anio ity.
Izaho manokana, fony vao tonga voalohany taty an-dafy dia nitsidika an'i Berlin, ary tany aho no nividy voalohany indrindra pensily ho an'ny manjamaso tamin'ity marika Essence ity. Tadidiko fa izay nahita an'izay pensiliko (manga ny lokony, mbola tsaroako 😉) izay dia niteny daholo hoe tsara be. Ankehitriny efa misy mpivarotra vokatra Essence maro eto Frantsa koa dia afaka manaram-po amin'izay 😊
Tato ho ato aho dia nanandrana vokatra vaovao koa indro zaraiko aminareo: lokomena 03 isa, pensily ho an'ny molotra 02 isa, ary fototra fametraka alohan'ny manjamaso 01 no novidiako. Efa herinandro izay no nahazoako azy ireo ary noho izany dia efa nampiasaiko avokoa izy rehetra. Tsy misy mihoatra ny 3€ ny vidin'ny iray amin'ireo.
Ity izao ilay fototra fampiasa ahosotra alohan'ny hanao manjamaso, tena mahafapo tanteraka ahy izy ity satria mora ahosotra ary tena mitàna tokoa ny manjamaso rehefa ampiasaina. Izany hoe, tsy ilay lasa mitambatra eo anelanelan'ny hodimaso rehefa tsemboka iny, maharitra eo ny loko natao mandra-panala azy amin'ny "démaquillant".
Ireto manaraka ireto indray ny lokomena, karazany samihafa mihitsy izy ireto rehefa tena hita maso fa tsy amin'ny sary fa eto moa izy tsy dia hitanareo tsara angamba fa ialako tsiny (somary mila miofana maka sary angamba aloha ny tenako e).
Adorable Matt - N° 14
On the catwalk - N°04
Blush my lips - N° 12
swatch (with flash): N°12 - N°04 - N°14
Ny azoko lazaina dia tsara loko ireo lokomena ireo ary tsy manamaina molotra mihitsy. Raha ny vidiny izay latsaky ny 3€ dia tsy misy hitarainana aho. Mandina tsara ny molotra na dia mbola mangatsiaka kely aza aty. Maharitra eo amin'ny molotro hatramin'ny oran'ny sakafo atoandro izy.
Ireto pensily fanosotra ny molotra ireto no tena tiako tena tiako sy ankafiziko indrindra, satria tena mety be loatra amiko, rehefa dinihiko dia tsy mila lokomena akory aza fa efa fahazarana moa ity mihosotra lokomena dia atao ihany.
Tsy misy kihanina izy ireto amiko, manana karazany maromaro aho amin'ireto pensily ireto satria mora loatra dia tsy maninona na ananana avokoa aza ny loko rehetra 😜
Marihiko fa izy ireto dia tena "longue tenue" na misakafo misy menaka aza aho, ny faritry ny molotra mijanona tsara eo, tsy mila mitondra pensily mandehandeha toy ny hoe tsy maintsy mitondra lokomena.
swatch (using flash): N°15 - N°08
Dia izay indray ny tsena, asa ianareo raha mba mankafy ny marika Essence toa ahy! Mba zarao e 😉
Mandra-pitafatafa indray ary ô
Publié par Ikala Fanja à 13:25 6 commentaires: